Shina Medium Duty Poly Tarp orinasa sy mpanamboatra | ShiningPlast
PE Medium Duty Poly Tarp dia vita amin'ny lamba vita amin'ny HDPE, nopetahana ny andaniny roa niaraka tamin'ny fitaovana LDPE, hafanana efatra nanisy tombo-kase nasiana tady PP tany amin'ny hoby. Grommets aluminium amin'ny elanelam-baravarana manodidina amin'ny zorony efatra Manamafy ny bara plastika.
Ny lamba vita amin'ny hoditra dia vita matevina ary ny kofehy vita amin'ny mahazakan-tsolika matevina dia miantoka ny vokatra vita amin'ny fananganana. Azo ampiasaina koa ny fitsaboana UV.
Weight 90-140 gsm
harato 10x10, 12x10, 12x12
Previous: Taribola poleta maivana
Manaraka: Mavesatra adidy Poly Tarp